Thwebula Videoder 12.1 – Vessoft
Videoder – isofthiwe umbono inthanethi bese ulanda amavidiyo kusuka service YouTube. Isofthiwe kwenza ukulanda isiqophi Ukugunda kunoma iyiphi definition atholakalayo, kuma-video takhiwo ehlukahlukene kuhlanganise amafayela alalelwayo ngefomethi MP3. Videoder ikuvumela ukulanda amafayela kanyekanye amaningi kanye nohlu lwadlalwayo umnyuziki noma iziteshi YouTube. Isofthiwe iqukethe isiphequluli esakhelwe ngaphakathi esenza ukuthola futhi ukulanda amavidiyo kusukela website ehlukene. Videoder ine interface enembile izakhi of service YouTube.
Play amavidiyo ephezulu definition
Play uhlu lwadlalwayo kanye neziteshi YouTube
Amazwana on Videoder:
Videoder Ahlobene software: